PM1550 Fiber Fiber က 1480nm Fiber Laser Module ကို Nonlinear Optics ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက်ပေးသည် - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Optic module တွေ > ဖိုင်ဘာလေဆာ module တွေ > PM1550 Fiber သည် 1480nm Fiber Laser Module ကိုချိတ်ဆက်ပြီး nonlinear optics အတွက်ဖြစ်သည်
အောက်ပါတို့မှာ PM1550 Fiber Coupon 1480nm Fiber Laser Module နှင့်ပတ်သက်သော Nonlinear Optics နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်ဖြစ်သည်။ PM1550 Fiber Coupled 1480nm Fiber Laser Module နှင့် Nonlinear Optics အတွက်ပိုမိုနားလည်စေရန်သင်ကူညီရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ အတူတူပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်လက်ပူးပေါင်းရန်အသစ်သောဟောင်းနွမ်းသောဖောက်သည်များကိုကြိုဆိုပါသည်။
PM1550 Fiber ၏ 1. နိဒါန်း 1480nm Fiber လေဆာရောင်ခြည် Module ချိတ်ဆက် nonlinear Optics သည်
1480nm လှိုင်းအလျားတစ်ခုသောလေဆာသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လိပ်ပြာ semiconductor လေဆာချစ်ပ်ကိုအသုံးပြုသည်။ မောင်းနှင်မှုပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် TEC ထိန်းချုပ်မှု၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းသည်လေဆာဖြင့်လုံခြုံစွာလည်ပတ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်သောစွမ်းအင်နှင့်ရောင်စဉ်တို့ကိုသေချာစေသည်။ ပလတ်စ်လေဆာရောင်ခြည်သို့မဟုတ် EDFA ဖိုင်ဘာအသံချဲ့စက်များအတွက်စုပ်စက်လေဆာအရင်းအမြစ်အဖြစ်သင့်လျော်သည်
PM1550 Fiber ၏ 2. Feature သည် 1480nm Fiber Laser Module ကို Nonlinear Optics အတွက်ချိတ်ဆက်ပေးသည်
PM1550 Fiber ၏ 3. Application သည် 1480nm Fiber Laser Module ကို nonlinear optics အတွက်အသုံးပြုသည်
4. PM1550 Fiber ၏ Optical-Electrical လက္ခဏာများသည် 1480nm Fiber Laser Module ကို Nonlinear Optics အတွက်ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
လှိုင်းအလျား operating nm 1480
output ကိုပါဝါ mW 200 ~ 400 စိတ်တိုင်းကျ
PM1550 Fiber ၏ 5. ပုံမှန်အားဖြင့်ကွေးညွတ် nonlinear မှန်ဘီလူးများအတွက် 1480nm Fiber Laser module တစ်ခုချိတ်ဆက်
၆။ PM1550 Fiber နှင့် 1480nm Fiber Laser Module မ်ားကို Nonlinear Optics အတွက်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း။
A: ကျွန်တော်တို့မှာ SM ဖိုင်ဘာနဲ့ PM ဖိုင်ဘာရှိတယ်။
A: 200MW နှင့် 400mW ရှိပြီးသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
hot Tags:: PM1550 Fiber Fiber က 1480nm Fiber Laser Module ကို Nonlinear Optics၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားများ၊ စက်ရုံ၊
MOPA စနစ်တွင်မျိုးစေ့အရင်းအမြစ်အတွက် 1064nm Fiber Laser Module